पहिलो पटक तीन लिङ्गका साथ जन्मियाे बच्चा, विज्ञानका लागि चुनौती – Waikhari
६. प्रगति टोल आमा समुह ठाकुरापुरद्वारा झुगां दुर्गा मन्दिरलाई आर्थिक सहयोग
७. कपिलवस्तुमा गहुँ काट्दै विप्लव
गृहपृष्ठ खबर पहिलो पटक तीन लिङ्गका साथ जन्मियाे बच्चा, विज्ञानका लागि चुनौती
पहिलो पटक तीन लिङ्गका साथ जन्मियाे बच्चा, विज्ञानका लागि चुनौती
इराकमा एउटा बच्चा तीनवटा लिङ्गका साथ जन्मिए । यो सामान्य मानिसको लागि मात्र नभएर चिकित्सा विज्ञान तथा विज्ञका लागिसमेत आश्चर्य बनाउने घटना बन्यो ।
यसको पछाडिको कारण विज्ञानलाई थाहा छैन । यस अवस्थालाई ‘सुपरन्युमरेरी पेनिस’ (Supernumerary penises ) भनिन्छ । अहिलेसम्म संसारभरमा एकसय द्वीलिङ्गी अर्थात् डिफालिया (Diphallia ) को केस आएका छन् । तर, यो तीन लिङ्ग ( Triphallia ) वाला केस भने पहिलो पटक सार्वजनिक भएको हो ।
यसलाई हालसम्म संसारकै पहिलो तथा दुर्लभ घटना मानिएको छ । यसअघि द्वीलिगी बच्चा जन्मिएका समाचार मात्रै आएका थिए । तर, यसको कारणको बारेमा भने अहिलेसम्म पनि पत्ता लागेको छैन ।
अहिलेको यो जन्मिएको त्रिलिङ्गी बच्चाले वैज्ञानिकका अगाडि गम्भिर तथा नयाँ चुनौती खडा गरिदिएका छन् ।
इराकको मोसुल शहर नजिकै दोहुकमा जन्मिएको यस बच्चाका दुइवटा लिङ्ग शलयक्रिया गरी फालिएका छन् । विज्ञका अनुसार ६० लाख बच्चामध्ये एक बच्चा एकभन्दा बढी लिङ्गका साथ जन्मिन सक्छ ।
हालसम्म संसारभरी झण्डै एक सय द्वीलिङ्गी केस थाहा भएका छन् । इन्टरनेशनल जर्नल अफ सर्जरीको केस रिपोर्टका अनुसार त्रिलिङ्गी केस भने पहिलो पटक भेटिएको हो ।
आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका अनुसार यो एउटा अति दुर्लभ रोग हो जुन ३ देखि १५ साताको भ्रुणमा हुने गर्छ ।
यस्तो पहिलो केस १६०० को दशकमा भेटिएको बताइएको छ । यसमा स्क्रोटम वा एनस पनि एकभन्दा बढी हुनसक्छन् । कैयौं पटक लिङ्ग अविकसित पनि हुन सक्छन् । हालसम्म भेटिएका केसहरु एक आपसमा अलग देखिएका छन् । यसकारण यसलाई एक दुर्लभ अवस्था भएकोसमेत बताइन्छ ।
यो घटनाको पछाडिको कारण स्पष्ट नभए पनि नशालु पदार्थको सेवन यसको कारण हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक सङ्क्रमणका कारण पनि यस्तो हुनसक्छ । रिपोर्ट जेनेटिक संरचनामा हुने परिवर्तनका कारण पनि यस्तो हुनसक्ने बताइएको छ ।
यसका कारण बिरामीमा ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट, स्केलेटल वा पेल्भिक हड्डीदेखि हृदयघातको समस्याको सामना पनि गर्नुपर्ने सम्भावना छ । सामान्यतया, यी सबै अंगले सामान्य तरिकाले काम गर्ने गर्छन् । तर, यी इराकी बच्चामा भने यो अवस्था थिएन । यसकारण यसलाई सहजै शल्यक्रियाद्वारा काटेर फालियो ।
लुम्बिनीमा सांसद र प्रहरीबीच झडप, केही सांसद घाइते
महामारीमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न उद्योग ब्यापार संगठन कपिलवस्तुको आग्रह
प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगेर शंकर पोखरेलद्धारा सपथ ग्रहण
भोलि राति १२ बजेदेखि आन्तरिक उडान बन्द, २२ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय..
लुम्बिनी प्रकरणमा भीम रावलको टिप्पणी- प्रधानमन्त्रीको छत्रछायामा पदलोलुप काम भयो
राष्ट्रपतिद्धारा वैशाख २७ गतेका लागि संसद्‍ अधिवेशन आह्वान
पहिरोका कारण अवरुद्ध बुटवल–तानसेन सडक पन्ध्र घण्टापछि खुल्यो
९९ प्रतिशतभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमितमा लक्षण छैन, न्यूनमात्रै सघन उपचारमा
नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन युरोपियन युनियनसँग अर्थमन्त्रीको आग्रह
सांसद र प्रहरीबीच झडपः डिआइजीले नै सांसदलाई पारे लछारपछार!
३८ सेकेन्डs अघि
भोलि राति १२ बजेदेखि आन्तरिक उडान बन्द, २२ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिने